Ịzọ Oke Ala: Enugu Na Anambra Akpọọla Oku Maka Udo
N'ihi oke nsogbu ahụ na-adapụtasị site n'ịzọ oke ala dị n'etiti steeti Anambra na Enugu; ọchịchị steeti abụọ ahụ akpọọla oku ka a gbaso usoro udo iji weta ya bụ ajọ ọnọdụ ahụ n'isi njedobe. Osote aka na-achị steeti Anambra bụ dọkịnta Nkem Okeke mere ka a mara nke a n'aha steeti abụọ ahụ, ma kpọkuokwa ndị ahụ na-ebute ya bụ ajọ ọnọdụ ka ha sepu aka na nke ahụ ma mịnye mma ya n'ọbọ.
Dọkịnta Okeke, bụ onyeisi oche kọmitii na-ahụ maka oke ala na steeti ahụ kpọrọ oku ha nwechaara nzukọ, ha na ndị e ji okwu ha agba izu n'obodo abụọ ahụ okwu ahụ metụtara, bụ Awba Ofemmil nke steeti Anambra na Ibite-Olo nke steeti Enugu. O mere ka a mara na a tụpụtala atụmatụ iji mee ka ụdị nsogbu ahụ gbarazie ịdapụta ọzọ n'ọdịnihu.
N'ihe gbasaara akụnụba ndị mmadụ e kwuru na e bibiri nakwa ndị mmadụ a tọọrọ atọrọ na mpaghara ebe ahụ n'ihi nsogbu ahụ, Dọkịnta Okeke kwere nkwa na site na njikọ aka ọnụ nke ha na ndị ụlọ ọrụ uwe ojii sitere steeti abụọ ahụ, na a ga-eme nnyocha pụrụ iche banyere nke ahụ, ma dụziekwa ndị mpaghara ahụ, bụ ndị e jiri ọrụ ugbo mara, ka ha wetuo obi ma nwee ndidi wee ruo mgbe otu kọmitii ala anyị na-ahụ maka oke ala mechaara nkpebi wee were aka ha kpaa oke ala n'etiti obodo ndị ahụ.
N'okwu nke ya, onyeisi oche okpuru ọchichi Ezeagụ nke steeti Enugu bụ Maazị Chukwudị Ezinwa gosipụtara oke ọṅụ juru ya obi banyere nkwekọrịta na ọkpụkpọ oku udo ahụ, ma kwuo sị na e busoro ndị si n'okpuru ọchịchị ya agha n'oge ya bụ nsogbu na-arị ibe ya elu. Otu ọ dị, ọ kọwara na o nwere olile anya na a ga-agbaso usoro ikpe nkwụmọtọ n'iweta okwu ahụ na njedobe, ma kpọkuzie ndị mmadụ ka ha gharazie iji aka ha enye ntaramahụhụ.
N'akụkụ nke ya, onyeisi oche nke okpuru ọchịchị Awka Nọọtụ nke steeti Anambra, bụ maazị Lawrence Ọnwụzuka kwuru na ọ ga-aka mma ka a gbaso usoro ghe anya oghe wee labara ya bụ okwu anya, karịa ịdị na-atụghasị etu ndị a siri megide ndị a, bụ nke enweghị uru ọbụla ọ ga-abara otu abụọ ahụ.
Ndị ọzọ nọ na nzukọ ahụ gụnyere eze ọdịnala obodo abụọ ahụ, ndị ọrụ uwe ojii sitere steeti abụọ ahụ, tinyere ndị ode akwụkwọ kọmitii na-ahụ maka oke ala na steeti abụọ ahụ.